An Asian Tour Operator: မြန်မာ နိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဘယ်သူဖြစ်သင့်လဲ
My Asia.. My Territory
မြန်မာ နိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဘယ်သူဖြစ်သင့်လဲ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး နေရာလတ်တစ်လော တွင်လစ်လပ် နေသဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နယ်ပါယ်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များ အပြင် စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ ၏ ဆန္ဒသဘောထား အား ဖော်ထုတ်ကြည့်ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ စိတ်ဝင်စားစရာ ရလဒ်များ ရလျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထင်မြင်ချက် မဲပေးသူ အရေအတွက် နည်းနေသေးသည့်အတွက် အများ၏ ဆန္ဒသဘောထား ဟုယူဆရန်ခက်ခဲပါသည်။
တခြား ပညာရှင်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း နယ်ပါယ် ကမဟုတ်သော်လည်း စိတ်ဝင်စား သူများ လည်း ထင်မြင်ချက် ပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျနော်၏ ဘလောက်တွင် တင်ပြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူ များ၏ အတွေ့ အကြုံ၊ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု့၊ အမြော်အမြင်ရှိမှု့၊ အစရှိသည့် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် အချက်များ အား အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ပြုစုတင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို ၀န်ခံပါသည်။
Vote for the one you wish to be Tourism Minister
မကြာသေးခင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်အမှတ် ၂၂/၂၀၁၂ အရ ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးများအားပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်မှုများရှိခဲ့ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးအပြောင်းအလဲရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ဝန်ကြီးရာထူးအားလစ်လပ်နေရာတွင်ပင်ရှိသေးရာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွင်း မည်သူကဝန်ကြီးပိုဖြစ်သင့်သည်ဟုပြောဆိုလာခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်းတို့အထဲမှာ တစ်ပြေးနေသူများအား ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအမှန်တကယ်လုပ်နေသည့်လူ အများ၏ဆန္ဒသဘောထားအားဖော်ထုတ်ြ ကည့်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဦးအေးမြင့်ကြူ (လက်ရှိ ဒုဝန်ကြီး အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ )
ဦးဌေးအောင် (လက်ရှိ ဒုဝန်ကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ )
တခြားဆန္ဒပြုလိုသူရှိပါကအောက်တွင်ရေးပါ။ (အရပ်သားလုပ်ငန်းရှင်၊ သို့မှဟုတ် မိမိနှစ်သက်ရာ ခေါင်းဆောင်နိုင်မည်ဟုထင်သူ)
Posted by An Asian Tour Operator at 8/30/2012 12:32:00 PM
Labels: Myanmar, Tourism, မြန်မာ ပို့စ်, မြန်မာပို့စ်, မြန်မာပို့စ် Tourim
If you choose to useanatural treatment for bacterial vaginosis, experiment with dietary or direct application fixes lumigan uk online Haveatreat or two, but don't eat the whole bag
oRelieve pressure - Adequate fiber (20-25 grams) and water will relieve/prevent constipation generic cymbalta Discover the symptoms of teen depression. It is deadly important to know how to help your kid
The latter surgery is skill-based and should be done byaphysician comfortable withamini-lap procedure to insure success Viagra for women pills There are plenty of condoms to fitanarrower chap, one example being the Pasante Trim condom; only 49mm wide
Its our obsession with producing cheap corn and finding every possibly way to get it into almost every food we eat iressa Now stretch your hands upright and slowly try to touch your toe-fingers
This combination has been used since ages Namenda over the counter The best way to deal with female hair loss is by treating the cause of it
9:13 AM, December 10, 2012
Thank you very much for visiting my blog. I really do. I am trying to write and share my knowledge, experience,information etc etc. I would be very much appreciated for your either encouraging or critical comments to my any post. Furthermore, some photos herein the posts are not mine and perhaps some information too. However I always try to credit or mention the courtesy of the respective owner and/or where I got it from. Anyway please leave your message anything regards to my blog or if you want to use any part of information from my blog. I would follow up thereafter your message, accordingly.
Location: Roaming Asia
Current Location: Bali, Indonesia
Blog Archive August 2018 (1) February 2018 (1) June 2016 (1) September 2014 (1) September 2013 (1) February 2013 (1) December 2012 (1) September 2012 (1) August 2012 (1) June 2012 (1) May 2012 (1) March 2012 (1) January 2012 (2) December 2011 (1) October 2011 (1) September 2011 (2) August 2011 (2) July 2011 (2) June 2011 (1) May 2011 (3) March 2011 (3) February 2011 (5) January 2011 (1) December 2010 (2) November 2010 (1) October 2010 (1) September 2010 (1) August 2010 (2) July 2010 (2) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (2) March 2010 (2) February 2010 (2) January 2010 (2) December 2009 (2) November 2009 (2) October 2009 (3) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (4) June 2009 (10)
English Posts (17)
Travel Experience (8)
မြန်မာ ပို့စ် (28)
မြန်မာပို့စ် Tourim (15)
Travel Myanmar Group
Copyright ©2010 An Asian Tour Operator | Blogger template created by: M T N | Powered by Blogger